Waa tee kooxda Carlos Tevez u ballan qaadday in ay ka dhigayso Laacibka ugu mushaarka badan Caalamka? – Gool FM
(Buenos Aires), 21 Nof 2016 –Weeraryahanka kooxda Boca Juniors ee Argentina, Carlos Tevez oo 33 jirsanaya Bisha Febraayo 2017 ayaa waxaa dhici karta in uu dhalashadiisa si wacan ugu dabaal dego waa haddii uu nasiib u yeesho in uu noqdo Laacibka ugu mushaarka badan Kubadda Cagta Adduunyada.
Wararka ka imaanaya Brazil iyo Bortuqiiska ayaa sheegaya in koox Shiinees ah oo aan la magacaabin balse loo badinayo Shanghai SIPG ay Tevez (El Apache) u soo bandhigtay mushaar sanadle ah oo gaaraya 40 Milyan oo Euros oo nadiif ah.
Yahoo Sports Brazil ayaa saakay sheegay in kooxdaasi Shiineeska ah ay doonayso in Tevez ay siiso 60% mushaar ka badan 25 Milyan Euros ee ay sanadkii qaataan laacibiinta Barcelona ee Messi iyo Neymar.
Wargeyska ‘Record’ ee ka soo baxa Bortuqiiska ayaa isagu qaba in kooxda laacibkii hore ee Manchester United, Manchester City iyo Juventus ee Tevez u gaartay 40 Milyan oo Euro sanadkii ay tahay Shanghai SIPG oo dhowaan qaadatay tababarihii hore ee Tottenham André Villas-Boas.
Bishii Febraayo ee sanadkan ayay ahayd markii Tevez uu ku gacan seyray mushaar Sanadle ah oo gaaraya 22 Milyan oo Euro oo ay u soo bandhigtay kooxda Shanghai SIPG waxaana taa beddelkeeda uu go’aansaday in uu ku laabto dalkiisa hooyo oo uu u ku biiro Boca Juniors.
Horyaalka Kubadda Cagta Shiinaha ayaa lacag fara badan la soo galay suuqa kubadda Cagta, waxaana ay urursanayaan ciyaartoy iyo tababareyaal caan ah, iyadoo Graziano Pelle oo u ciyaara SHandong Luneng uu sanadkii qaato 16 Milyan oo Euro, halka Ezequiel Lavezzi, Ramires iyo Asamoah Gyan ay iyagana jeebka ku shubtaan sanadkii 13 Milyan oo Euros oo bilaa Canshuur ah.
DEG DEG: Kooxda xafidaneysa horyaalka Soomaaliya ee Banaadir SC oo guul wayn ku furatay xilli ciyaareedka cusub